Maxaad Kala Socotaa Qorshaha Liverpool Ay Ku Soo Qaadaneyso Mid Kamid Ah Xiddigaha Muhimka Ah Ee Bayern Munich – Kooxda.com
HomePremier LeagueMaxaad Kala Socotaa Qorshaha Liverpool Ay Ku Soo Qaadaneyso Mid Kamid Ah Xiddigaha Muhimka Ah Ee Bayern Munich
June 28, 2021 Osman Fantastic Premier League, Wararka Maanta 0
Xiddiga reer France iyo kooxda kubada cagta Bayern Munich Kingsley Coman ayaa lagu soo waramayaa in uu xagaagan diirada u saaranyahay ku biirista kooxda Liverpool ee ka ciyaarta horyaalka Ingriiska.
Kooxda reer Merseyside ayaa lagu soo waramayaa in ay awoodeeda isugu geyn doonto sidii ay u soo qaadan laheyd xiddigan ku wanaagsan weerarka isla markaana orodka dheereeya leh.
Sida uu daabacayo wargeyska lagu magacaabo Sport1, kooxda Liverpool ayaa haatanba bilowdey in ay wada hadalo la furto wakiilada xiddigan, iyagoona diyaar u ah in xiddiga ay ku qanciyaan in xili ciyaareedka dambe uu ka ciyaaro garoonka Anfield.
Wararku waxaa ay intaasi ku sii darayaan in kooxda reer England ay dooneyso in ay ka faaideysato helista adeega xiddigan ka hor inta aanu qandaraas cusub u saxiixin kooxdiisa oo qandaraaska uu haatan kula jiro uu keliya uga harsanyahay wax ka yer laba sanadood.
Macalinka dhawaan galka ah ee kooxda Bayern Munich Julian Nagelsmann ayaa isaguna dhankiisa diyaarinaya qorshihii uu heshiis cusub uga saxiixan lahaa xiddigan 25sano jirka ah.
Ugu Dambeyn wargeyska Gazzetta Dello Sport ayaa qoraya in kooxda Bayern Munich hadii ay iibineyso Xiddigan xili ciyaareedkii hore 8-da gool u dhaliyey 12ka kale caawiyey ay keliya ku fasixi karto xiddigaan 43Milyan oo Ginni
Maxaa Ka Jira Wararka Sheegaya In Antoine Griezmann Uu Ku Biirayo Manchester City??